Forogo, Banga Nechipunu Sets - China Forogo, Banga Nezvigadzirwa vagadziri uye bhizimisi
Cutlery inoreva zvakawanda pakuonekwa kwese kwetafura yako, uchiwedzera mweya uye kunakidzwa pakudya kwese, kuratidza maitiro kune hwedu hupenyu kunyangwe nzanga yese. Pretty Shiny Gifts Inc., inopa akasiyana siyana cutlery seti anosanganisira epamusoro chikafu giredhi 304 simbi dzesimbi dzisina waya, maforogo, zvipunu, mashanga anozogara iwe hupenyu hwese, kana zvazvino maitiro uye masitayera mune anotsvaira ePLA mashanga, inodonhedzwa organic gorosi mashanga zvinhu zvemasikati mabhokisi iyo inobatsira pasi kuti rive rakajeka mangwana. Zvese zvinhu zvinobvumidzwa neDFA, zvakanaka kumba & kicheni, pamwe neresitorendi & bhawa, chikoro kana kufamba kwekunze kubva pasarudzo huru yemasanganiswa akagerwa. Inouya nenzira dzakasiyana siyana kuti ugone kuwana zvaunoda, chero chiitiko, uye isu tine zvakawanda sarudzo pane yega kosi. Nemhando iyi inoshamisa unogona kurodza tafura yako nekacheka katsva paSJJ, tsika yekunyora kana kudhinda logo inogamuchirwa. Taura nesu izvozvi kuti tiwedzere mamwe masitayera patafura yako yemanheru neketi yedu yekucheka!
Rakajeka Rubber Bhodhoro Rinomira / Tsvuku Waini Vamisa
Inobata Ceramic Coasters
Silicone Cake MAUMBIRWO
Reusable Plastiki Kunwa Makapu
Biodegradable Pepa Kunwa Mashanga
Stainless Simbi Forogo, Banga Nechipunu Set
Stainless Simbi Ice Cube
Biodegradable PLA mashanga
Stainless simbi uswa
Gorosi Straw Lunch Bhokisi, Yemidziyo yemidziyo